Ndima Battery Pack Voltage: 12V, 24V
Applications : zvikuru akagadzirirwa uriri yokuchenesa michina uye stackers, uyewo dziripo dzimwe utility nemotokari.
Isu Svika zvakawanda.
AODI Q Series Charger ndiye MINI uye akangwara mundiro. Zvakanaka hf / PFC mundiro anoshanda pane chero chete kutotanga.
Customized kuchaja Profiles zviri nyore kubatsira vatengi kuwana bhatiri kuchaja sanduko. Mafomu zvinosanganisira zvemuchadenga basa platforms, uriri kutarisirwa michina, gorofu ngoro, zvinhu kukurukurwa midziyo uye utility nemotokari.
Next: 6.6KW SC + 2KW DC / DC Converter powder Cooling
0400188 Jlg 48v 18 BSN Battery Charger
0400196 Jlg 48v 18 BSN Battery Charger
1001103105 Jlg 48 V 18 BSN Battery Charger
1001123054 Jlg 48v 18 BSN B attery Charger
Genie 2032 Scissor rikudzwe Charger
Jlg 193es Scissor rikudzwe Charger
Jlg 48 V18 BSN Battery Charger
Lester UYU Charger
Niftylift rikudzwe Battery Charger "
Scissor rikudzwe Charger